ပါရမီ ဆေးရုံ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ပါရမီအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကို 2010 ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှစတင်၍ အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးဆေးရုံအနေဖြင့် စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး 2011 ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် အသက်အရွယ်မရွေး၊ ရောဂါမရွေး၊ အထွေထွေကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများကို 24 နာရီ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေသော အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ပါရမီအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံသည် ကျယ်ဝန်းသောမြေဧရိယာအတွင်းရှိ 12 ထပ်ပါ အထပ်မြင့်အဆောက်အဦးဖြစ်ပြီး အတွင်းလူနာ 68 ယောက်ခန့် တက်ရောက်နိုင်ကာ ကလေးငယ်တွေရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် အထူးကြပ်မတ်ကုသဆောင်နှင့် အချိန်ပိုင်းစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုပေးသည့်ဌာနတို့ထားရှိပြီး ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ ပြင်ပလူနာဌာနတွင်လည်း အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
"အရည်အသွေးပြည့်မီပြီး အဆင့်မြင့်သောဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက် မှုပေးနိုင်ရန်" မျှော်မှန်းချက်ဖြင့် စေတနာမေတ္တာ အပြည့်ထားကာ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး အသက်အရွယ်မရွေး၊ ရောဂါမရွေးကုသပေးမှုတွင် ထိပ်တန်းမှဦးဆောင်နိုင်သော ဆေးရုံဖြစ်ရန်အတွက် အစဉ်တစိုက်ကြိုးပမ်းကာ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဆေးကုသမှုနည်းစနစ်များဖြင့် လူနာများကုသမှုခံယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ရည်တည်နေသောဆေးရုံဖြစ်ပါသည်။
1. Digital X ray (ပုံမှန် X-ray ထက်တိကျပြတ်သားသောဒစ်ဂျယ်တယ်ဓာတ်မှန်)
2. Ultrasonography (တယ်လီဗီးရှင်းဓာတ်မှန်)
3. 4D Ultrasound (လေးဖက်မြင်ပုံရိပ်ဖော်စက်ခန်း)
4. 2D Colour Doppler Echocardiogram (နှလုံးဝေဒနာရှင်များအတွက် Echocardiogram)
5. Magnetic Resonance Imaging(MRI)(24hours)(လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်မှန်)
6. 160 Slice CT Scan-Toshiba Prime AquilionMultislice Helical Scanner(24hours) ဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
B. 24 နာရီဓာတ်ခွဲခန်း
Clinical Chemistry (သို့) Chemical Pathology စမ်းသပ်မှုဆိုသည်မှာ ခန္ဓာကိုယ်လုပ်ဆောင်ချက်တွင် မူမမှန်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၄င်းစမ်းသပ်နည်းများသည် ရောဂါရှာဖွေခြင်း၊ ကုသခြင်းများအတွက် လွန်စွာအရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်သည်။
Haematology ဆိုသည်မှာ သွေးနှင့်ပတ်သက်သည်များကို လေ့လာသော သိပ္ပံပညာရပ်ဖြစ်ပြီး သွေးရောဂါများ ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Clinical immunology သည် ကိုယ်ခံအားနည်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေသည့် ရောဂါများကိုလေ့လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သာမန်မျက်စိဖြင့်မမြင်နိုင်သည့် ရောဂါပိုးမွှားတွေကို အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းသုံးကာ ရောဂါပိုးအမျိုးအစားကို ရှာဖွေသတ်မှတ်ပြီး ကုသမှုပေးပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်တွင်မူမမှန်အကျိတ်၊ အဖုများတွေ့ရှိက အသားစယူစစ်ဆေးရာတွင် အသားစနမူနာများကို Histopathology Section သို့ပို့ပြီး စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သည့် Biopsies ကိုမဆို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။
အထွေထွေကလေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဌာနတွင် ကလေးအရေးပေါ်ကုသမှုဌာန၊ ကလေးပြင်ပလူနာဌာန၊ ကလေးအတွင်းလူနာဌာနတို့ထားရှိကာ ကလေးကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်ချက်မှန်သမျှကို ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။
2. ကလေးဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဆိုင်ရာဌာန
ကလေးများအတွက် ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောကုသမှုကို ပထမဆုံးဆောင်ရွက်ပေးသောစင်တာဖြစ်ပြီး ကလေးများတွင်အဖြစ်များသော ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးမှုရောဂါကို ကလေးဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ကုသမှုရလဒ်ကောင်းများရရှိစေရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစား ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။
မွေးရာပါကလေးနှလုံးရောဂါအပြင် ကလေးများတွင်ခံစားရသော နှလုံးရောဂါအမျုိးမျိုးအား ရောဂါရှာဖွေ ကုသပေးခြင်းကို ကလေးနှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများက ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
နာတာရှည်ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊ ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာရောဂါအမျိုးမျိုးကို ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်၍ ရောဂါ အခြေအနေအပေါ်မူတည်ပြီး ကလေးကျောက်ကပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများက ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် အ၀လွန်ခြင်းပြဿနာသည် ပိုမိုတိုးပွားများပြားလာပြီး အ၀လွန်သူများထဲတွင် အရွယ်ရောက်ပြီးချိန်မှ အ၀လွန်သူများဒုနဲ့ဒေးရှိသလို ငယ်စဉ်ကလေးဘ၀တွင်ပင် အ၀လွန်နေသူများလည်း အမြောက်အများပင်ဖြစ်သည်။ ပါရမီအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံရှိ ObesityClinic တွင် ထိုကဲ့သို့အ၀လွန်သူများကို မည်သို့နေထိုင်ရမည်၊ မည်သို့စားသောက်ရမည် စသည့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေရန် လိုအပ်သော အဓိကကျသည့် အချက်အလက်များကို သေချာအသေးစိတ် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာ နည်းလမ်းကောင်းများဖြင့် အ၀လွန်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုသမှုပေးနေသောပါရဂူ၊ ကျွမ်းကျင်ဆေးဝန်ထမ်းများမှ လိုအပ်သည့်အကြံဉာဏ်များပေး၍ ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကလေးငယ်တွင် ခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည့်ရောဂါများကို ပါရမီအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံရှိ ကလေးအထွေထွေခွဲစိတ်ကုသမှုဌာနတွင် ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။ ခွဲစိတ်ကုသမှုများကို အတွေ့အကြုံရင့်သန်သော ကလေးခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်များကိုယ်တိုင် ကုသပေးနေသည့်အပြင် ကျွမ်းကျင်သူနာပြုဆရာမများက အထူးဂရုစိုက်ပြုစုပေးလျက်ရှိပါသည်။
ကလေးပန်းနာရင်ကြပ်ကုဌာနတွင် ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါရှိသူ ကလေးလူနာများအား ခံစားရသည့်ရောဂါအခြေအနေ ပြင်းထန်နှုန်းပေါ်တွင်မူတည်ပြီး ထိရောက်သောဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။
သွေးနှင့်ပတ်သက်သော ရောဂါများနှင့်ပတ်သက်၍ ရောဂါရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းမှ ကုသမှုပေးခြင်းထိ ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
မွေးကင်းစကလေးငယ်များအတွက် လိုအပ်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများ၊ သွေးစစ်ဆေးမှု များကို ပြုလုပ်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
III. သားဖွားမီးယပ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအားကုသခြင်း
Preconception health screening (ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန်အတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း)၊ Antenatal care (မီးမဖွားမီပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း)၊ Intrapartum care (ကလေးမွေးဖွားချိန် အတွင်း ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးခြင်း)၊ Postnatal care (ကလေးမွေးဖွားပြီးနောက် ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်း) စသည့် သားဖွားမီးယပ်ဆိုင်ရာ ပြုစုကုသမှုများကို ၀န်ဆောင်မှုပေးဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ထို့အပြင် -
- အရေးပေါ်အထွေထွေသားဖွားမီးယပ်ကုသမှုအတွက် 24 နာရီအပြည့် ကုသမှုပေးခြင်း
- အမျိုးသမီး မျိုးပွားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းရောဂါများ၊ ရင်သားကင်ဆာအတွက် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်း
- အဖြစ်များသောအမျိုးသမီးရောဂါများဖြစ်သည့် ရာသီမမှန်ခြင်း၊ သွေးထိမ်ခြင်း၊ သွေးဆုံးခြင်း၊ သားအိမ်အတွင်းမြှေးနေရာ လွဲခြင်း၊ ၀မ်းဗိုက်နှင့် အောက်ပိုင်းအတွင်းရှိ အကျိတ်အဖုများ၊ သားအိမ်အသားလုံးတည်ခြင်း၊ သားဥအိမ် အရည်အိတ်တည်ခြင်း၊ ဆီးအိတ်ကျွံခြင်းနှင့် ဆီးနှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စရပ်များအား ကုသပေးခြင်း
- ကိုယ်ဝန်အစောပိုင်းကာလတွင်ဖြစ်တတ်သော ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်သည့် သားလျှောခြင်း၊ သားအိမ် ပြင်ပသန္ဓေတည်ခြင်း၊ gestational trophoblastic disease ကို ကုသပေးခြင်းတို့ကိုလည်း ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
သဘာဝအတိုင်း ကလေးမီးဖွားလိုသူများအတွက်လည်း နာကျင်မှုကင်းသည့် ကလေးမွေးဖွားမှု (Painless Labour Package) ဖြင့် နာကျင်မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ခါးအောက်ပိုင်း ထုံရန်ကျောအောက်ဘက်၌ ထုံးဆေထိုးပြီး သက်တောင့်သက်သာမွေးနိုင်ရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အထွေထွေခွဲစိတ်ကုသမှုများအပြင် ဂျာမနီနိုင်ငံလုပ် (High Definition) ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသည့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကြည့်မှန်ပြောင်း (Storz Laparoscopes) အသုံးပြုပြီး Minimal Invasive Surgery များကို လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါသည်။
ပါရမီဆေးရုံတွင် ပစ္စည်းကိရိယာစုံလင်စွာပါရှိသည့် အဆင့်မြင့်ခွဲစိတ်ခန်းနှစ်ခန်းရှိပါသည်။ အရည်အချင်းပြည့်ဝသော ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးများကိုယ်တိုင် ခေတ်မီပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။
အရိုးကျိုးခြင်းအတွက်ကုသမှု၊ အရိုးပွခြင်းအတွက်ကုသမှု၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့ယွင်းခြင်း၊ မသန်စွမ်းခြင်းအတွက် ကုသမှုတို့ဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
လည်ပင်းကျီးပေါင်း၊ ခါးကျီးပေါင်းရောဂါများမှအစ လေဖြတ်ဝေဒနာရှင်များအထိ ပြန်လည် သန်စွမ်းရေးဆိုင်ရာ ကုသမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေသော ဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ စက်ကိရိယာပစ္စည်းများစုံလင်ပြီး ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များဖြင့် ၀န်ဆောင်မှုပေးလျက်ရှိပါသည်။
Audiology သည် အကြားအာရုံချို့ယွင်းမှု၊ နားမကြားသူများပြန်ကောင်းလာရေးအတွက် လေ့လာသော ပညာရပ်ဖြစ်ပြီး အကြားအာရုံသည် မည်သို့မည်ပုံအလုပ်လုပ်သည်၊ ကြားနိုင်စွမ်းအား၊ နားထောင်သည့်အခါ ချို့ယွင်းချက်ရှိသလားဆိုသည့် အချက်များပေါ်တွင်အခြေခံ၍ ကုသပေးခြင်းဖြစ်ကာ အကြားဆုံးရှုံးနေသူများအား ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် ကုသပေးသည့်နည်းဖြစ်ပါသည်။
VIII. အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနှင့် အိပ်စက်နေစဉ် အသက်ရှူရပ်သည့်ရောဂါများအား ကုသခြင်း
အိပ်နေစဉ် အသက်ရှူရပ်သည့်ရောဂါ၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများအား Polysonogram နည်းပညာသုံး၍ ကုသပေးပါသည်။
IX. နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါများအားကုသခြင်း
နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းကုသမှုတွင် OPD၊ ခွဲစိတ်ကုသမှု၊ နားတွင်းပြွန်လိမ် ထည့်သွင်းကုသမှု စသည့်နည်းများဖြင့် ကုသပေးလျက်ရှိပါသည်။
X. ကျောက်ကပ်သွေးသန့်စင်ဌာန (Haemodialysis Centre)
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးခေတ်မီနောက်ဆုံးပေါ် ompact R.O System ကို အသုံးပြု၍ ပိုးမွှားသန့်စင်ထားသော ကျောက်ကပ်တုသွေးသန့်စင်စက်၊ ဂျပန်နိုင်ငံထုတ် နောက်ဆုံးပေါ် Nipro Surdial 55 Dialysis Machine ဖြင့် ဂျပန်နည်းပညာကိုအသုံးပြုလျှက် လူနာများအား အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။
အထူးကြပ်မတ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သည့် လူနာများကိုအရည်အချင်းပြည့်ဝသော ဆရာဝန်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူနာပြုများက အထူးဂရုပြုစောင့်ရှောက်ပေးပါသည်။
ဆေးရုံတက်ရောက်၍ ကုသမှုခံယူရမည်ဆိုပါက အောက်ပါအခန်းအမျိုးအစားများထဲမှ မိမိတို့အဆင်ပြေသည့် အခန်းအမျိုးအစားကို ရွေးချယ်တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။
5. Elegant Room
6. Standard Room တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ပါရမီအထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံ၏ ပြင်ပလူနာဌာနတွင်လာရောက်၍ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူနိုင်သော သမားတော်ကြီးများမှာ -
- အထွေထွေရောဂါအထူးကု သမားတော်ကြီးများ
- နှလုံးနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော အထူးကုသမားတော်ကြီးများ
- ဆီးနှင့် ကျောက်ကပ် အထူးကုသမားတော်ကြီးများ
- အဆုတ်နှင့် ရင်ခေါင်း အထူးကုသမားတော်ကြီးများ
- အထွေထွေခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများ
- အရိုးအကြောအဆစ်နှင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- ကလေးဆီးနှင့် ကျောက်ကပ်ရောဂါ အထူးကုသမားတော်ကြီးများ
- ကလေးသွေးနှင့် ကင်ဆာအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- ကလေးဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောအထူးကုသမားတော်ကြီးများ
- နား၊ နှာခေါင်း၊ လည်ချောင်းအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်း၊ အသည်း၊ သည်းခြေလမ်းကြောင်း အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- အစာအာဟာရနှင့် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဆိုင်ရာ အတိုင်ပင်ခံပညာရှင်
- ကလေးပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- မိသားစုနှင့် အိမ်ထောင်ရေးဆိုင်ရာ စိတ်ကျန်းမာရေးအတိုင်ပင်ခံပညာရှင်များ
- မျက်နှာနှင့် မေးရိုးခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ
- စကားပြောလေ့ကျင့်ရေး ကုထုံးပညာရှင်များတို့ဖြစ်ကြပြီး နေ့စဉ်သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ဇယားအတိုင်း တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကုသပေးနေပါသည်။
အိမ်တိုင်ရာရောက် ဆေးကုသခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း မနက် 8 နာရီမှ ည 7နာရီအထိ အိမ်တိုင်ရာရောက် မိသားစုများစိတ်ချမ်းမြေ့၊ ကျန်းမာစေရန် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါသည်။ (ညပိုင်းအရေးပေါ် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု လိုအပ်ပါကလည်း နိုင်ငံတကာအဆင့်အရေးပေါ်ဌာနမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကုသမှုပေးနေပါသည်။)
အသက်ကယ် စက်ကိရိယာမျိုးစုံတပ်ဆင်ထားသော လူနာတင်ယာဉ်များဖြင့် 24 နာရီ အပြည့်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
XVI. MaternityPackage အစီအစဉ်များ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအတွက် ကလေးမွေးဖွားရန်မိမိစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်နိုင်မည့် Package များ၊ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးလိုသူများအတွက် အသက်အရွယ်နှင့် ကျားမအလိုက် သင့်တော်သည့် Package များကို စီစဉ်ပေးထားပါသည်။
XVII. နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအရေးပေါ်ဌာန (International Emergency Room)
မည့်သည့် အရေးပေါ်အခြေအနေမဆို ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များ ၊ သူနာပြုများနှင့် ၀န်ထမ်းများမှ (24) နာရီ ၀န်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။
အမှတ်-60၊ G-1၊ ပါရမီလမ်းသစ်၊ ချော်တွင်းကုန်းမှတ်တိုင်အနီး၊ ပါရမီလမ်းမကြီးပေါ်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
01-651 674, 01-660 083, 01-657 226, 01-657 228, 01-657 230, 01-657 231, 01-657 227
1) Hot line - 01-657 228
2) For Home Health Care Services - 09-975 401 349, 09-977 909 9996
3) For Emergency Services - 01-657 930
4) For CT/MRI Services - 01-657 229
5) For Haemodialysis Centre - 09-977 909 994, 09-977 909 998